Koox burcad badeed ah oo xalay weerartay markab ku sii jeeday dekadda Muqdisho, dilayna kabtankii markabkaasi. – Radio Daljir
Koox burcad badeed ah oo xalay weerartay markab ku sii jeeday dekadda Muqdisho, dilayna kabtankii markabkaasi.
Muqdisho, Sept 25 – Koox burcad badeed Soomaali ah ayaa xalay weerar ku qaaday Markab ganacsi oo ku sii jeeday dekadda weyn ee magaalada Muqdisho, isla markaana toogtay Kabtankii markabkaasi oo u dhashay dalka Siiriya.
Markabkaan oo lagu magacaabo MP Barwaaqo ayaa sida la sheegay ka diiwaan-gashan dalka Barama, waxaana uu u rarnaa ganacsato Soomaaliya ah, kuwaasi oo wax kala soo degi jiray dekadda weyn ee magaalada Muqdisho.
Kooxdaan burcadda ah oo tiradood lagu sheegay illaa 6 nin, ayaa Markabka ku weeraray labo doonyood oo ah nooca dheereeya, waxaana weerarkaasi uu ka dhacay meel dhowr Mayl u jirta xeebta magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay ku toogteen Kabtankii Markabka labo ka mid ah shaqaalihii Markabkana ay ku dhaawaceen.
Sida uu sheegay taliyaha ciidanka bileyska Soomaalliya Gen. Cabdi Xasan Cawaale Qayb-diid, oo falkaasi warbaahinta uga warramay, khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawacba waxay yimaadeen kadib markii halkaasi gaareen ciidanka bileyska dawladda KMG ah ee Soomaaliya oo u socday Markabka in ay soo galbiyaan, kadibna ay la kulmeen rasaas ay burcaddu ku soo furtay.
Taliyihu waxaa uu sheegay ciidanku in ay rasaastaasi ka jawaabeen, kadibna ay dib uga soo laabteen Markab, si ay abaabul iyo gurmad dheeraad ah u heleen, wuxuuna intaasi ku daray ku labashadii danbe ee halkii weerarku ka dhacay in ay la kulmeen kooxdii oo markabkii ka degatay iyo Maydka Kabtan iyo dhaawaca shaqaalaha kale ee Markabka.
Md. Qayb-diid, waxaa kale oo uu sheegay mid ka mid ah askarta bileysku in uu ka dhaawacmay rasaasta ay is waydaarsadeen iyaga iyo kooxda burcad badeeda ahi, kaas oo uu xaaladdiisa caafimaad ku tilmaamay mid liidata.
Markabka la weeraray iyo shaqaalihii saarnaa oo u badan dalka Siiriya, ayaa hadda ku xiran dekedda magaalada Muqdisho, waxaana warar laga heshay shaqaalaha Markabkaasi ay sheegayaan dilka Kabtanku in uu yimid kadib markii uu ka dhago adaygay amaro ay burcaddu u soo jeediyeen oo tilmaamayey in uu dib u celiyo Markabka.
Haatan waxaa socda baaritaano dheeraad ah oo ay wadaan ciidanka bileysku oo ku aaddan sidii loo ogaan lahaa dhacdadaasi weerar iyo sida ay ku yimaadeen khasaarooyinka dhimashao iyo kuwa dhaawac.